တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံတွေ့ဆုံသည် (ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
တာချီလိတ်မြို့၊ နဂါးနှစ်ကောင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီး၏ သက်တော်(၉၀)ပြည့်၊ ဝါတော်(၇၀)ပြည့် ဝိဇာတပူဇာ မွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ(ရုပ်သံသတင်း)